Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.3.1 Representation
Wakiil ku saabsan yahay qaadashada go'aano ka soo jawaabay si aad u dadka aad bartilmaameed.
Si aad u fahamto nooca khaladaad u dhici kartaa marka inferring ka soo jawaabay in dadka waaweyn, aynu fiirsan poll oo kale caws buu Suugaanta Dhayjast in isku dayay in la saadaaliyo natiijada doorashada US Madaxweynaha 1936. Inkasta oo ay ahayd in ka badan 75 sano ka hor, Jabkii this weli cashar muhiim ah baro maanta cilmi.
Suugaanta Dhayjast ahaa magazine guud-danta caan ah, oo laga bilaabo 1920 waxay bilaabeen socda doorashada kale caws buu u tahay in la saadaaliyo natiijada Doorashooyinka Madaxtooyada. Si aad u samayso saadaasha kuwan waxay dad badan oo u soo diri lahaa codadka, ka dibna si fudud fayoobi ilaa codadka la soo noqdeen, Suugaanta Dhayjast kibir sheegay in codadka ay heleen ayaa mana "miisaamaa, beddelo, mana fasiray." Habkani waxaa si sax ah u saadaaliyay in guusha doorashada ee 1920, 1924, 1928 iyo 1932-in 1936, oo ku dhex jira Depression Great ah, suugaanta Dhayjast baxay codadka ilaa 10 milyan oo qof, kuwaas oo magacyadooda ku badanyihin dadka ka tusaha taleefanka iyo diiwaanka diiwaan gaari yimid diray. Halkan sida ay ku tilmaameen in ay hab:
"Dheefshiido THE ee dhaqaaqdo mashiinka siman-socda usii dheereeya soddon sannadood 'waayo-aragnimo in la yareeyo alala in xaqiiqooyinka adag. . . .Tani Waxay todobaadkii 500 qalimaan xoqo in ka badan rubuc ka mid ah a million cinwaanada maalin. Maalin kasta, qolka weyn sarreeya afaraad Avenue motor-ribboned, ee New York, 400 oo shaqaale u danbeysay ciyaarta simbiriirixan a million oo gogo 'oo daabacan arrin-ku filan oo ay waddo afartan blocks-gelin qariyay qabto [ingula] magaalada. saacad kasta, in dheefshiido EE u gaar ah Office Post xarumo, mashiinada Electricity boostada saddex afgembi laga shaabadeeyey laba iyo tuntay ah oblongs cad; shaqaalaha boostada xirfad leh iyaga Wajigooda ferjiga mailsacks; baabuur raxan dheefshiido falkaasi iyaga u muujiyaan mail-tareenada. . . Toddobaadka soo socda, jawaabaha ugu horeysay ka tobankan million bilaabi doonaan hir soo socda codadka calaamadayn karo, in ay saddex-baaro, rumoobo, shan jeer cross-xogo iyo ahayd. Marka tirada la soo dhaafay ayaa la totted oo laga fiiriyaa, haddii waayo-aragnimo ee la soo dhaafay waa Faraj, dalka ku ogaan doonaa in ay gudahood tiro yar oo boqolkiiba 1 cod dhabta caanka ah ee afartan million [codbixiyayaasha]. "(August 22, 1936)
The Dhayjast ee fetishization of size waa isla garan karo in kasta oo cilmi-"data weyn" maanta. Of the 10 milyan oo cod qaybiyey, la yaab leh 2.4 million codadka ayaa ku soo laabtay-in qiyaastii 1,000 jeer ka badan doorashada siyaasadeed oo casri ah. Kuwaasay 2.4 million jawaabeyaasha xukunka cad: Suugaanta Dhayjast saadaaliyay in tartame ee Alf Landon socday in laga adkaado ku haya Franklin Roosevelt. Laakiin, dhab ahaantii, ka soo horjeeda saxda ah dhacay. Roosevelt adkaaday Landon ee Schalke a. Sidee Suugaanta Dhayjast tegi karin qaldan xog aad u badan? Our fahamka casriga ah ee sampling dhigaysa khaladaad Suugaanta Dhayjast ee cad oo naga caawisaa fogaado sameeyay qalad la mid ah mustaqbalka.
Fikirka cad oo ku saabsan sampling na waxay u baahan tahay in la tixgeliyo afar kooxood oo kala duwan oo dadka (Jaantuska 3.1). Kooxdu waxay ugu horeysay ee dadka waa dadka bartilmaameedka; tani waa kooxda in cilmi qeexayaa sida dadka oo xiiso leh. In the case of Suugaanta Dhayjast dadka bartilmaameedka ahaa cod-Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ee 1936. Ka dib markii go'aan ku saabsan dadka bartilmaameed u ah, oo cilmibaadhis ku xiga u baahan yahay si loo horumariyo liiska dadka in loo isticmaali karaa sampling. Liiskaan waxaa lagu magacaabaa jir sampling ah iyo dadweynaha on jir sampling waxaa la yiraahdaa dadka ku yiilleen. In the case of Suugaanta Dhayjast dadka ku yiilleen ahaa 10 milyan oo qof oo magacyadoodu ku yimid u badan ka tusaha taleefanka iyo diiwaanka diiwaangelinta baabuurta. Sida habboon dadka bartilmaameedka iyo dadka ku yiilleen isku noqon lahaa, laakiin dhab ahaan waxa ay inta badan ma aha kiiska. Farqiyada u dhexeeya dadka bartilmaameedka iyo dadka jir waxaa loo yaqaan baadi caymiska. baadi Caymiska ma, keligeed dammaanad dhibaatooyinka. Laakiin, haddii dadka ku jira dadka ku yiilleen yihiin si nidaamsan oo kala duwan ka dadka aan dadka ku yiilleen waxaa jiri doona eexda caymiska. Baadi Caymiska ahaa kii ugu horeeyay oo ka mid ah ayna duleella u weyn oo la ra'yiururin Suugaanta Dhayjast. Waxay doonayeen in ay bartaan oo ku saabsan cod-in waxay ahayd bartilmaameed dadka-laakiin waxay u dhisay jir sampling a badanyihin ka tusaha taleefanka iyo diiwaannada gaari, ilaha in ka badan-wakiil hantiilayaal Americans oo ahaa u badan tahay in ay taageeraan Alf Landon (xusa in labada teknoolajiyada kuwan, kuwaas oo maanta caadi ah, waxay ahaayeen xad cusub oo waqti iyo in Mareykanka wuxuu ku dhex jiray Depression Great ah).
Jaantuska 3.1: khaladaad Wakiil.
Ka dib markii la qeexo dadka ku yiilleen, tallaabada xigta waa cilmibaadhaha ah in ay doortaan dadka saamiga; kuwanu waa dadkii cilmibaadhaha isku dayi doona inay wareystaan. Haddii tijaabada leeyahay sifooyin kala duwan oo ka badan dadka ku yiilleen, ka dibna waxaan ku bilaabi kartaa baadi sampling. Tani waa nooca baadi tirin in goolasha ay ku baadi in sida caadiga ah uu weheliyo, qiyaasaha. Marka ay jirto xaalad ah Buuqa Suugaanta Dhayjast, waxaa dhab ahaa muunad lahayn, waxay isku dayeen in ay qof walba la xiriir in dadka ku yiilleen. Inkastoo jirin baadi sampling, waxaa iska cad ahayd qalad weli. Taas waxaa caddaynaya in xadad qaladaad in caadi ahaan la sheegay qiyaasaha ka soo sahan sida caadiga ah waa majaraha- yar; iyagu ma waxaa ka mid ah dhammaan ilaha qalad.
Ugu dambeyntii, cilmibaadhe isku dayaysa in ay waraysi qof kasta oo dadka saamiga. Dadka Kuwa si ​​guul waraystay waxa loo yaqaan jawaab bixiyayaasha. Sida habboon, dadka saamiga iyo jawaabaha saxda ah isku mid noqon lahaa, laakiin dhab ahaan waxa jira aan jawaab. Taasi waa, dadka soo xulay in saamiga diido inay ka qayb qaataan. Haddii dadka jawaabaan yihiin kuwa aadan ka jawaabin kala duwan, markaas waxaa jiri kara eexda aan jawaab. Eexda Non-jawaabta ahaa dhibaatada labaad ee ugu weyn ee la ra'yiururin Suugaanta Dhayjast. % Ka mid ah dadkii helay cod oo kaliya 24 jawaabtay, oo waxay u leexatay in dadka taageeray Landon waxay u badantahay in ay ka jawaabaan.
Beyond kaliya isagoo tusaale inay soo bandhigto fikradaha of metelaad, ra'yiururin Suugaanta Dhayjast waa masaal kula ah, marar badan soo noqnoqota, digay cilmi ku saabsan khatarta sampling qasay.Shacabka. Nasiib darro, waxaan u malaynayaa in cashar ah in dad badan oo ka sheekadan dhaansado waa mid qalad ah. moral ugu badan ee sheekada waa in cilmi aan wax ka baarka aan jaaniska baran karaan (ie, baarka aan lahayn xeerar iyo ixtimaalka ku salaysan adag xulashada ka qaybgalayaasha). Laakiin, sida aan ku tusi doonaa goor dambe oo cutubkan, ma ahan arrin sax ah. Halkii, waxaan qabaa in si dhab ah waxaa jira laba anshaxa sheekada this, anshaxa in waa sida runta ah maanta sidii ay ahaayeen ee 1936. Marka hore, xaddi weyn oo xog katimid ururiyay ma ballan qaadi doonaa qiyaasta wanaagsan. Second, cilmi u baahan tahay in lagu xisaabiyo sida ay xogta la ururiyey markii ay ku sameynayaan qiyaasaha ka. In si kale loo dhigo, maxaa yeelay habka xog ururinta ee ra'yiururin Suugaanta Dhayjast waxaa si nidaamsan buunbuunin xagga jawaabaha qaar ka mid ah, cilmi u baahan tahay in miisaanka jawaabaha qaar ka mid ah oo dheeraad ah u isticmaalaan habka a qiimaysay sii adag kuwo kale. Later cutubkan, waxaan ku tusi doonaa waxaad ka mid miisaan sida hab-post-stratification-in aad awood karaa in la sameeyo qiyaas fiican leh baarka aan jaaniska.